Kufutshane noMjikelo woNyaka weZulu
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguGatherall'S
Ukuphumla okumangalisayo kulo lonke ixesha lonyaka. Ukuhamba ngekwindla, ukutyibiliza ekhephini entwasahlobo, ukukhwela ikhephu ebusika, okanye ukurhoxa ehlotyeni- ibekwe ngokugqibeleleyo kweyona ndawo intle yeNewfoundland.
Khululeka kwibhafu eshushu esecaleni kwechibi kwaye uthobe kubuhle bendalo.
Amaxabiso adwelisiweyo abandakanya i-15% yerhafu (hst) esebenzayo kunye nentlawulo yokucoca.
I-$ 200fee iya kongezwa ukuba ufuna ukusetyenziswa kwe-tub eshushu (i-tub prep & intlawulo yenkonzo ibandakanya irhafu esebenzayo). .
Ifakwe kumbindi weHumber Valley Resort, iGatherall's 3 yokulala yodidi oluphezulu chalet ibekwe kumda womlambo ozolileyo weHumber.
Le intle 4.5. I-star chalet inamagumbi okulala ama-3 agcwele ngee-ensuites, umbono ovulekileyo ovulekileyo Igumbi elikhulu elinendawo yomlilo kunye nokutya ekhitshini. Ukusetyenziswa okubanzi kweeplanga kunye nokulungisa yonke indawo kudala ukuziva kamnandi kunye ne-rustic.
IPasadena / i-Humber Valley ithathwa njengeyeyona ndawo intle yesiqithi saseNewfoundland.
Ixesha ngalinye lonyaka lizisa ubuhle balo kunye nomtsalane. Ihlobo linika igalufa ephumelele ibhaso, ukuloba ibhabhathane elikumgangatho wamazwe ngamazwe kwimilambo yesalmon yeKlasi A kunye nokuhamba intaba, ukukhwela inqanawa, ukukhwela ibhayisekile ezintabeni, lonke uhambo lokuhamba ngezithuthi, i-zip-lining nokunye! I-chalet yethu isisiseko esifanelekileyo sokuhlola i-Humber Valley kunye nengingqi yaseNtshona kubandakanya iGros Morne National Park emangalisayo-iNdawo yeLifa leMveli le-UNESCO.
Rhoqo kwi-Fall, i-palette ebukekayo yombala oqaqambileyo igubungela iNtlambo ekhuphisana neNew England. Ubusika buzisa owona msebenzi ubalaseleyo wasebusika kwimpuma yeRockies, ukusuka kwi-skiing ezantsi, ukutyibiliza kwezinja, ukutyibiliza ekhephini, ukutyibilika ekhephuni, ukukhwela inqanawa, i-zip lineing kunye nokuhamba ngekhephu ukukhankanya ezimbalwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Gatherall'S
Abanini abekho kwisiza kodwa sinomfowunelwa wasekhaya okufutshane ukuba ufuna into ehoyiweyo okanye unemiba.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pasadena